Ukungena kukaVisa okungasetyenziswanga kuLowo uphumeleleyo! | Martech Zone
Ukungena ngemvume okungatshatanga kuye kwangqinwa kusebenza kuyo yonke ibhodi- nokuba kukusebenzisa ukungena kwezentlalo ukugcwalisa iifom zamaphepha okufika, okanye ngoku ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuhlawula ukuguqula ngokukhawuleza umthengi. IVisa ibonelela ngophawu olunye kwinkqubo ebizwa Visa Checkout esele ikho ukwamkelwa ngokubanzi.
Ngokukhula ngokukhawuleza kwiinyanga ezili-10 ezidlulileyo, ukuphuma kweVisa kubonise ukwamkelwa okubalulekileyo kunye namazinga encoko. Baza kube bekhaba intengiso enkulu yentengiso kunye nemikhankaso yentengiso kweli hlobo. Ukuza kuthi ga ngoku, benze i-splash kwishishini, nangona.
4 yezigidi zeeakhawunti zabaxumi
Ngaphezulu kwe-125,000 yabarhwebi abakhulu nabancinci
Amaqabane eziko lezemali angama-260
Kuphononongo lwakutsha nje lwe-comScore (jonga ngezantsi), kwavezwa ukuba abathengisi beVisa Checkout babonile i umyinge wama-69% wokuguqula izinga labasebenzisi abakhoyo ngoku Ukuthenga. Oku ngama-66% aphezulu kunamazinga okuguqula abikiweyo ngokukhangelwa kwendabuko kwi-Intanethi
Umndilili we-odolo obekwe kwi-Visa Checkout wawuyi-7% yeepesenti ephezulu kune-odolo ebekwe kwiindawo zentengiso kunye nezokuhamba nezinye iindlela zokuhlawula. Ingxelo eyahlukileyo kaMillward Brown ifumanise ukuba iipesenti ezingama-95 zabathengi beVisa Checkout bathe ukubhalisa kwakulula kunye ne-96% bathi ndiziva ndikhuselekile ukuyisebenzisa.
IVisa nayo iya kwenza intengiso kunye kunye nemikhankaso yokwazisa ukuqala kwehlobo.
tags: iintlawulo onlineUkulungiswa kwentlawulouphawu olunyeivisaukuphuma kwevisa